HORDHACA: Kulanka finalka Super Cup-ka ee Dekedda vs Muqdisho City iyo xaqiiqooyinka aad uga baahan tahay labadan kooxood kahor kulankan – Gool FM
HORDHACA: Kulanka finalka Super Cup-ka ee Dekedda vs Muqdisho City iyo xaqiiqooyinka aad uga baahan tahay labadan kooxood kahor kulankan
(Soomaaliya) 30 Jan 2019. Koobka Super Cup-ka dalka ayaa lagu wada in galabta la ciyaaro kulankiisa qura ee go’aamin kara kooxda koobka qaadi karta xili ay ku hardamayan kooxaha Dekedda fc iyo Muqdisho City Club Ex Banadir Sports Club.
Koobkan sida caadada ah waxaa wada ciyaara labada kooxood ee kusoo kala guuleysta labada koob ee kala ah Horyaalka Somali Premier League iyo koobka General Daa’uud.
Kooxda Dekedda ayaa ku soo guuleysatay horyaalka Somali Premier League markii labaad oo xiriir ah xili Wiilasha Muqdisho City Club ay gacanta ku soo dhigeyn koobka lagu maamuso sanad walba aas aasihii ciidanka xuuga dalka Soomaaliya Jeneraal Daa’uud Cabdulle Xirse, waxaana ay ka qaadeyn kooxda ku suntan magaca koobkan ee Horseed.
Kulankan xiisaha badan ayaa wuxuu ka dhici doona garoonka Banadir Stadium ee dhaca Degmada Cabdicasiis.
Kooxda xafidaneysa horyaalka Somali Premier League ee Dekedda ayaa u muuqaneysa mid ka itaal roon dhigooda Muqdisho City Club maadama 10-kii kulan ee ugu dambeysay ay ka guuleysteyn 5-kulan halkan shanta kalana ay dhibcaha kala qaateyn labada dhinac .
Kulankii ugu dambeyay ay is arkan labadan kooxod waxey ku kala baxeyn bar bao 1-1, ciyaar ka tirsaneyd tartanka koobka General Daa’uud sanadkii dhamaaday 2018-.
XAQIIQOOYINKA DEKEDDA FC:
Kooxda Dekedda ayaa waxaa ka hor imaan doona goolhayihii ka saaciday iney ku guuleysato horyaalka Somali Premier League ee Saciid Yamani kaa oo iminka shaqada u ilaalinaaya naadiga Muqdisho City, kuna darso waa goolhayaha ugu qaalisan horyaalka.
Dekedda ayaa lumisay qaar kamid ah xidigiihi u gacan galiyay horyaalka Soomaaliya kal ciyaareedkii tagay 2017-18, iyago ka bixitaanka kooxdooda ee xidigahaasi ku asturi kara iney dib u soo ceshteyn mid kamid xidigaha ugu halista badan looguna jacelyahay dalka ee Cabdicasiis Catoosh.
Naadiga Dekedda wali waxaa ka dhax guuxaya guuldaradii ka soo gaartay kooxda Elman Koobka Super Cup-ka sanadkii dhamaaday xili laga gacan maroojiyay wiilasha Yu Cali Koobkan ay galabta dheeleyso.
Wiilsha Dekedda ayaa maalmihii la soo dhaafay muujinayay u diyaar garowga kulanka finaalka koobka Super Cup-ka Dalka.
Xidigii hore kooxda Muqdisho City Club Caadil Nuur Cali ayaa markii ugu horeysay wajihi doona kooxdii uu waqtigiisa ugu badnaa ee kubadda cagta uu ku qaatay ee MCC Ex-Banadir Sports Club isago xiran maaliyada kooxda Dekedda.
Wiilasha Hussien Mbalango ayaa wali dareemaya xanuunkii iyo jahwareerkii ay ka soo qaadeyn natiijadii bar dhamaadka koob lagu xusayay allaha U naxariistee Wariye Cawil Daahir Salaad kadib markii ay la ciyaareyn kooxda Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Heegan.
Xidigaha Muqdisho City Club ayaa doonaya iney meesha ka saaran taariikhda xun ee diiwanga ugu qoran taas oo ah in aysan guul ka gaarin Dekedda 10-kii Kulan ee Ugu Dambeysay oo ay Dekedda ku wajahan dhamaan tartamada oo dhan, mana ku qanci doonan wax aan aheyn guul ay ka soo hooyan dheesha Dekedda.
Muqdisho City Club ayaa waxey weyn doonta xidigaha Kala ah Jeyna iyo Cabdiqaadir Eenow Bantike kuwaaso oo dhaawacyo kala duwan ugu maqan kooxdooda.
Tartanka: Super Cup-ka Dalka
Qiimaha: Lacag La’aan
Jawiga Garoonka: 30° /24°C
Unai Emery oo ka warbixiyay waxa looga baahan yahay Arsenal in ay diirada saarto inta ka harsan xili ciyaareedkan
“Kulanka Sevilla waxa uu noqon doonaa caqabad weyn ee ina hor taala” - Valverde